Brave Voices | YOPE
Home \_ Brave Voices
သူငယ်ချင်းတို့ … ချစ်သူများနေ့မှာလက်ဆောင်ပေးဖို့ ပြင်ဆင်နေကြပြီလား ဘာလို့ပေးမှာလဲ..ပြောပြပါဦး..
ကိုယ့်နဲ့ အရင်းနှီးဆုံးသူကို facebook password ပေးရဲလား?
DO YOU EVER HEARD ABOUT PRECAUTION FOR EARTHQUAKE? ငလျင်သတိပေးချက်တွေကြားဖူးလား?
ငလျင်နဲ့ပတ်သတ်ပြီး သတိပေးချက်တွေထဲက ဘယ်အချက်ကို မှတ်မိလဲ? သူငယ်ချင်းတို့ သိမယ်ဆိုရင် လက်လှမ်းမီသမျှ သူငယ်ချင်းတွေကို ပြောပြကြပါဦး. www.yope.com.mm www.mizzima.tv www.mizzima.com www.mizzimaburmese.com
WHAT IS YOUR NEW YEAR NIGHT PLAN?
Hey… Yope သူငယ်ချင်းတို့.. ယူတို့ New Year ည ဘာအစီအစဉ်တွေရှိလဲ? www.yope.com.mm www.mizzima.tv www.mizzima.com www.mizzimaburmese.com
ရည်းစားဟောင်းနဲ့ ပြန်တွေ့ရင် ဘာလုပ်မလဲ?
ရည်းစားဟောင်းနဲ့ ပြန်တွေ့ရင် ဘာလုပ်မလဲ? ………………………………………………….. လူတိုင်းမှာ အချစ်ဟောင်းဆိုတာ ရှိတတ်ကြပါတယ်။ တကယ်လို့များမတော်တဆ လမ်းမှာ ရည်းစားဟောင်းနဲ့ ပြန်တွေ့ခဲ့ရင် ဘာလုပ်မယ်ထင်လဲ? www.yope.com.mm www.mizzima.com www.mizzimaburmese.com www.mizzima.tv
ကိုယ့်ချစ်သူရဲ့ ဘယ်လိုအပြူအမူမျိုးက လူကြားထဲမှာ ကိုယ့်ကို စိတ်အနှောင့်အယှက်ဖြစ်စေလဲ www.yope.com.mm www.mizzima.com www.mizzimaburmese.com www.mizzima.tv
National’s Heritages: Redecorate or Original?
ရှေးဟောင်းအမွေအနှစ်တွေကို မူလအတိုင်း ထိန်းသိမ်းထားသင့်လား? ပြန်လည်ပြုပြင်သင့်လား? သူငယ်ချင်းတို့ အမြင်ရော ဘယ်လိုရှိလဲ? www.yope.com.mm www.mizzima.com www.mizzima.tv www.mizzimaburmese.com
Which songs do you hear in your early morning?
အခုတစ်လော နားထဲမှလဲစွဲ .. သွားသွားလာလာ လှုပ်ရှားနေရင်းတောင် အမှတ်မထင် ကိုယ်နှု့တ်ကနေ ရေရွတ်မြည်တမ်းရတဲ့ သီချင်းတွေ တော်တော်များလာပါတယ် .. ဒီတော့ နေ့တစ်နေ့ရဲ့ မနက်အိပ်ယာနိုးတာနဲ့ နားထဲအရင်ဆုံးရောက်လာတဲ့ သီချင်းက ဘယ်သီချင်းတွေဖြစ်မလဲ? သူငယ်ချင်းတို့က ပျော်ပျော်ပါးပါး မျှဝေပေးသွားပါဦး…. www.yope.com.mm www.mizzima.com www.mizzima.tv www.mizzimaburmese.com